एक्सेल डेभलपमेण्ट बैंकले ३०% हकप्रद असोज २५ गतेदेखि निष्कासन गर्दै
असोज २२, काठमाडौं । एक्सेल डेभलपमेण्ट बैंकले ३० प्रतिशत हकप्रद शेयर असोज २५ गतेदेखि निष्कासन गर्ने भएको छ ।
कम्पनीले १० बराबर ३ अनुपातमा रू. १०० अंकित दरको २४ लाख ३३ हजार ३६३ कित्ता हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न लागेको हो ।उक्त हकप्रद शेयरमा आवेदनकले कात्तिक १४ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीले हकप्रद शेयर निष्कासन प्रयोजनको लागि असोज १ गते बुक क्लोज गरिसकेको छ ।
यस आधारमा भदौ ३१ गतेसम्म कायम शेयधनीले उक्त हकप्रद शेयरमा आवेदन दिन सक्नेछन् । हकप्रद शेयर निष्कासन विक्री प्रबन्धक एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।एक्सेल डेभलपमेण्ट बैंकका सम्पूर्ण शाखा कार्यलयहरु, आस्बा सेवा अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सफ्टवेयर मार्फत पनि आवेदन दिन सक्नेछन् ।
कम्पनीले निष्कासन गर्न लागेको हकप्रद शेयरलाई इक्रा नेपालले आइआर त्रिपल बि माइनस रेटिङ प्रदान गरेको छ । यस्तो रेटिङले वित्तीय दायित्व पूरा गर्न मध्यम जोखिममा रहेको देखाउँछ ।हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ८१ करोड ११ लाख रहेको छ । ३० प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासन पछि उक्त पूँजी रू. १ अर्ब ५ करोड पुग्नेछ ।